Jikelele-Conditions of Sale of Rikoooo.com
Lokhu website www.Rikoooo.com eka self-usonkontileka Bender Erik (ngemuva kwalokhu ozobizwa Rikoooo), Ihhovisi ogama obhalisiwe at 107 chemin port de port, 31410 UNoé, abhaliswe ne-Trade and Companies Register ngaphansi inombolo Siret 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. Inhloso yalezi Izimfuneko Nemibandela of sale ukuchaza imigomo nemibandela kanye nemibandela yokuthengisa phakathi Rikoooo kanye namakhasimende zalo waphetha kule website ngaphansi kwazo. Ukuqinisekisa icon okwenza umthengi ukujwayelana futhi banamathele wezimo zamanje jikelele kokudayiswa Uyobenza kwemvume singenakushintshwa futhi okuyiqiniso Enkulumweni yakhe kulesi zonke Iinjamiso ezitholakala Izimo jikelele kokudayiswa.
I-Athikili 1 - Inhloso kwenkululeko
1.1- Lezi Izimo jikelele kokudayiswa BUSA yimuphi omunye umbhalo umthengi, futhi ikakhulukazi kunoma iyiphi izimo jikelele zokuthenga, ngaphandle uma express nangaphambi sivumelwano wokwedelela yenkampani yethu.
1.2 - La Izimo jikelele kokudayiswa zisebenza kubo bonke yokuthengisa imikhiqizo inkampani yethu kwi website yayo ngaphandle uma isivumelwano ethize ngaphambi oda bavumelana ngokubhala phakathi amaqembu.
1.3 - Noma iyiphi enye idokhumenti ngaphandle kwalezi Izimo jikelele kokudayiswa futhi ngo zincwadi ikakhulukazi, prospectuses, izikhangiso, izaziso, kuyinkomba kuphela, non-nezivumelwano. I izithombe ihluzo ezivezwe website kukhona Indlela kuphela futhi awalwi wemfanelo nomthengisi.
I-Athikili 2 - Ifa Lomqondo
Zonke imibhalo, imibono, imifanekiso kanye nezithombe yakhiqizwa esakhiweni www.Rikoooo.com agodliwe kanti kukhona impahla okukhethekile Rikoooo noma abahlinzeki bawo futhi bavikelekile ngaphansi copyright nempahla izwe lonke Futhi imiklamo, tinkhulumo, amalungelo obunikazi, amapulani kanye uwonke wonke amadokhumenti kwanoma yiluphi uhlobo sihanjiswe mathupha noma sithunyelwe nge Rikoooo ikhasimende impahla okukhethekile Rikoooo noma abaphakeli babo.
I-Athikili 3 - Oda
3.1 - Imikhiqizo ahlinzekwa ukudayiswa by Rikoooo labo ezethulwe www.Rikoooo.com nezici ogama ebalulekile ezichazwe lapha. Ngokuhambisana neSigaba L. 111-1 of the Code Consumer, okuyinto ubeka ukuthi "zonke professional othengisa izimpahla noma amasevisi, kuyothi ngaphambi isiphelo sesimiso inkontileka, beka umthengi usesimweni ukwazi izimfanelo ezibalulekile izimpahla noma amasevisi ", le nkampani Rikoooo ivumela ikhasimende, ngaphambi yimuphi umyalo wokubekwa kwengane, ukukhankasa ufuna ukwaziswa okwengeziwe ngezingosi le mikhiqizo ngocingo noma nge-imeyili, izinombolo esisesigabeni esethulweni yalezi zimo jikelele kokudayiswa.
Rikoooo uthembisa ukunikeza ikhasimende nanoma yiluphi ulwazi olwengeziwe angase abafisa ukuthola uma engazihlanzi azibheke ngokwanele waziswa yihlangano incazelo kanye nezici imikhiqizo adayiswa esakhiweni oshiwo ngenhla.
Nokho, kungumsebenzi ikhasimende ukuze uqinisekise ukuthi imikhiqizo wayala zivumelana ngezidingo zakhe uya khona, ikhasimende kokuba onesibophezelo for nesikhathi imikhiqizo nokusetshenziswa okuyiwona kuhloswe.
3.2 - Automatic ukuqoshwa izinhlelo abhekwa ubufakazi bemvelo, okuqukethwe kanye nosuku oda. Rikoooo kuqinisekisa ukwamukelwa oda ayo ukuze ikhasimende ekhelini e-mail ukuthi kuyoba uke wakhuluma. I indali kuphela waphetha ngemuva ukuqiniswa komyalelo.
Rikoooo uyaligodla ilungelo ahoxise oda kusuka ikhasimende nobani kukhona ingxabano emayelana ukukhokhwa oda sangaphambilini. Ulwazi esashiwo umthengi, lapho ethatha umyalelo, uzinikela ikhasimende: uma kwenzeka amaphutha imininingwane yomemukeli, nomthengisi asikwazi icala akunakwenzeka wokwethula umkhiqizo.
3.3 - Rikoooo uyaligodla ilungelo lokwenza noma yiziphi izinguquko noma ukuthuthuka ukuthi ubona kufanele nganoma isiphi isikhathi imikhiqizo yayo, ngaphandle lokhu sesilungisisiwe ikhasimende, nokwenqaba ukwamukela kanye iyaligodla ilungelo Ngesikhathi nokusula omunye imikhiqizo ungaveli website yayo, lokhu kususwa awukwazi ngabe yikuphi abuye asekele phezu ingxenye ikhasimende, abanye ukonakalelwa okungaba kukhona. Uma umkhiqizo kwakumelwe asuswe futhi ikhasimende akazange ufisa ukuba akhethe omunye umkhiqizo ezifana ncimishi noma ezithi azifane, ukuze sakhe esasiyoba yesulwe ipso jure kanye izimali zikhokhwa bekuyoba ibuyiselwe.
iminikelo umkhiqizo Rikoooo bayatholakala ngaphakathi umkhawulo esitokisini etholakalayo futhi imikhiqizo hhayi egcinwe emagcekeni Rikoooo, ngokweyame ukutholakala mpahla, okuyizinto kwamandla Rikoooo. Uma kwenzeka yokuswela imikhiqizo emva obeka oda, Rikoooo sithembisa ukwazisa ikhasimende ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngeposi, i-inthanethi noma e-mail. Ikhasimende kungaba ke oda zakhe futhi Rikoooo ngeke abuyisele ngaye, njengoba ngokushesha ngangokunokwenzeka, yimuphi sum sasingase eqoqwe ikhasimende.
Noma yimuphi yokuswela imikhiqizo, nganoma isiphi isizathu, kungaba akunakusetshenziswa zisenza sibe ukukhokhwa by Rikoooo yezinye umonakalo kanye nezithakazelo noma ezinye izindleko yanoma yiluphi uhlobo.
I-Athikili 4 - Ukudiliva
Ukulethwa kwempahla angaphatheki senziwa ngokushesha emva kokuba semthethweni lokukhokha.
I-Athikili 5 - Price
The yokuthengisa amanani imikhiqizo oluyonqunywa tariff force ngosuku iflarha oda. Rikoooo uyaligodla ilungelo ukuguqula amanani ayo ngasiphi isikhathi futhi uma ukushintshashintsha amanani, amanani esebenzayo kuyoba yilabo empeleni ngosuku yokwamukela oda.
Amanani kanye namanani lokuphekiwe www.rikoooo.com ezicashunwe euro Abaculi. Ziyakwazi net yanoma yimuphi isaphulelo kungabalwa kwezidingo noma izindleko zokuthumela.
I-Athikili 6 - Inkokhelo
6.1 - Inkokhelo
Ukukhokhwa imikhiqizo yayala on the www.rikoooo.com site kwenziwa cash on oda PayPal noma 2Checkout (CB) noma Hlola.
6.2 - Non-lokukhokha / Ukugcinwa isihloko sigatshana
Noma yimuphi isigameko yokukhokha kuzoyigunyaza Rikoooo lokumisa ekukhishweni yonke imiyalo ezivelele ikhasimende, ngaphandle wamuva kokuba ukwazi ukufaka isicelo amademeshe noma indemnities kwanoma yiluphi uhlobo. Ngaphezu kwalokho, umthengi kuyakuba buyisela Rikoooo zonke izindleko ezivele nokuvulwa tibalo ezingakhokhiwe, kuhlanganise a isamba semali lokumiswa of 10% of the tibalo esifanele, ngaphandle kokubandlululwa yimuphi omunye umonakalo kanye nesithakazelo.
Lapho imikhiqizo edayiswa ingangeni ikhokhwe ngokugcwele ngesikhathi kwezidingo, Rikoooo uyaligodla impahla kuze ukukhokhwa egcwele intengo oyinhloko izesekeli ohambelana, ukukhokhwa ngokwencazelo yaleli yalesi sigatshana kokuba kuqondwe iqoqo Price by Rikoooo. Esimweni izinsuku default 8 emva incwadi isaziso esisemthethweni ethunyelwa ngocingo incwadi erejistiwe ne bazisise irisidi bese akuphumelelanga, ukudayiswa izokhanselwa njengokungathi wokulungile uma okuhle sibonakala singenandaba Rikoooo ngaphandle kokuphazamisa amanye umonakalo kanye nesithakazelo.
I-Athikili 7 - Isiqinisekiso izici nobumbi kufihlwe
Rikoooo uqinisekisa ukuthi imikhiqizo yayo ukuhambisana nemithetho French kanye zaseYurophu force ngokuphathelene nabo, njengoba zikhona.
I-Athikili 8 - Ulwazi nominative
Rikoooo uthembisa hhayi ukuxhumana besithathu ulwazi ngocansi kulo iklayenti, okuyinto iyimfihlo. Lolu lwazi izosetshenziswa nge amasevisi yangaphakathi Rikoooo ukucubungula oda yekhasimende. Ngokuhambisana Data Protection Act ka 6 January 1978, ikhasimende unelungelo lokufinyelela, ukulungiswa kwananoma nokuphikiswa idatha yomuntu siqu ngaye. Ukuze wenze lokhu, kwanele ukuba isicelo online noma ngeposi, ecacisa igama, igama lokuqala, ikheli kanye, uma kungenzeka, le reference ikhasimende.
I-Athikili 9 - Force majeure
Rikoooo kungenzeka akhululwe zonke noma ingxenye izibopho zayo ngaphandle kokuba ukwazi ukufaka isicelo yimuphi umonakalo kulo uma kwenzeka izimo ezingalindelekile nezingabonakali kusengaphambili yizona noma force majeure ekuvimbeleni noma ukubambezeleka ukusebenza imikhiqizo noma ezinye izakhi zabo.
Uma umcimbi kudonsa izinsuku ezingaphezu kuka amathathu kusukela osukwini lapho ivela khona, isivumelwano sokudayiselana waphetha ngokukhumbuza inkampani yethu futhi kwamakhasimende yayo ingase Ingayekiswa ingxenye yayo ikhuthalele kakhulu, ngaphandle yimiphi amaqembu Can lokufuna ukunxeshezelwa. Lokhu ukwesulwa kuzosebenza ngosuku yokuqala yencwadi ezibhaliswe ne AR ukuyilahla inkontileka wathi of sale.
I-Athikili 10 - Amandla
By isivumelwano express phakathi amaqembu, iNkantolo Ephakeme Yase indlunkulu yethu Commercial kuyoba wedwa onesibophezelo sanoma yikuphi izingxabano noma yikuphi ukuqhuba ezihlobene ukwakhiwa, ukubulawa noma incazelo yalezi Izimo jikelele kokudayiswa futhi yonke imisebenzi Sales of Rikoooo imikhiqizo. Lezi izimo jikelele kokudayiswa futhi bonke yokuthengisa eyenziwe Rikoooo angaphansi komthetho waseFrance.
I-Athikili 11 - Noma
Iqiniso lokuthi inkampani yethu asipheli, nganoma isiphi isikhathi, uyovuma yiziphi ekhonzile yalapha, abakwazi waive ilungelo ancike kulezi imitjhwana ngolunye usuku.